Dalxiis Warshad - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Kusoo dhawow Histe
Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkadu waa alaab xadhig qabow oo buuxa, oo ka samaysan shumac caag silica ah oo la soo waariday oo ay soo saareen khubaro caan ah oo caag ah, farmashiyeyaal iyo khabiiro shabakad iyada oo loo marayo baadhitaanno iyo tijaabooyin toddobo sano ah. Meelaha qalabka fiilooyinka ee qabow ee ku yaal Shiinaha, ayaa ku hoos jira saadaasha xuquuqda lahaanshaha gobolka. Kadib markii ay tijaabisay Machadka Cilmi-baarista ee Wuhan High State State Grid Corporation ee Shiinaha, Xarunta Qaranka ee Kormeerka Tayada iyo Tijaabinta Insulator iyo Surge Arrester, heerarka qaran ee GB11033 , GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-199, badeecooyinka ayaa loo arkay inay uqalmayaan inay buuxiyaan heerarka qaran ee dhinacyada oo dhan.
Dhamaan 256-ka shaqaalaha ah, dadka haysta dhakhaatiirta ama shahaadada koowaad ee jaamacadeed waxay ku xisaabtamayaan 17.
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay ku jirtaa meesha ugu horreysa guriga iyada oo la maareynayo aaminaadkeeda casriga ah, xoogga farsamada ee la xoojiyay, nidaamka kormeerka tayada codka, shahaadada tayada iyo shahaadada oo dhameystiran, farsamo tijaabo ah oo horumarsan iyo adeegga la ansixiyay kadib.
Muddo 10 sano ah, waxaan u soo bandhignay malaayiin fiilooyin fiilooyin iyo alaabooyin kale oo shabakad taageerta ah oo loogu talagalay dhismaha iyo dib-u-habeynta shabakadda korantada qaranka. 2004 shirkaddu waxay si buuxda u fulisay 500kV iyo insulators ka hooseeya danab, 35kV iyo danab hoose oo zinc oxide ah oo sii kordhaya. beddelashada, fiyuuska bixitaanka, tuubbada basbaas hoostiisa korontada, buusterka la daadiyo, fiilooyinka korantada kororka xadhigga (sanduuqa), duurka derbiga, iwm Tani waxay xaqiiqsatay boodbood taariikhi ah oo ka imanaya alaab koronto oo hooseysa iyo mid dhexdhexaad ah oo koronto sarreysa iyo mid sare leh, min hal ilaa, samaynta Qayb weyn ka qaadashada badbaadada korantada korantada ee warshadaha korontada, tareenka, warshadaha saliida, macdanta dhuxusha iyo shirkad kale oo weyn.Waxaan had iyo jeer ku adkeysaneynaa siyaasadeena oo indhaha ku haysa mustaqbalka shirkadda isla markaana siineysa adeeg dhan walba leh.